Bixiyahaaga adeegga ee xaadirkan ayaa qaadi doona qashinka ilaa dhammaadka Mey. Waxaad ku sii wadan doontaa isticmaalka isla gawaarida-gacanta oo Recology CleanScapes ayaa bilaabi doonta qashin qaadka muddada ah toddobaadka Juun 1. Gawaari-gacmeedyadaada iyo weelashaada qashinka ayaa dib loogu calaamadayn doonaa macluumaad cusub gudaha Juun.
Haddii aad wax su'aalo ah aad ka qabto biilal ku dallaca ama weyddiisyada adeegga heeganka ah ka hor Mey 31keeda, fadlan kala xiirir Maamulka Qashinka (Waste Management) taleefanka 800.592.9995 . Haddii aad jeceshahay in lagaa beddelo mugga gaari-gacmeedkaaga waxa ka dambeeya Mey 18keedafadlan la xiriir Recology CleanScapes. Weydiisadyada isbeddellada mugga gaari-gacmeedkaaga ayaa la oofin doona kaddib Juun 2eeda.